Nea Edi Kan a Ɔde Kɔmaa Korintofo 4:1-21
Ɛsɛ sɛ ofiehwɛfo yɛ ɔnokwafo (1-5)
Ɛsɛ sɛ Kristofo brɛ wɔn ho ase (6-13)
“Monnyɛ ade nntra nea wɔakyerɛw no” (6)
Wiase ne abɔfo ne nnipa nyinaa rehwɛ Kristofo (9)
Paul dwen wɔn a wɔyɛ ne mma wɔ gyidi mu no ho (14-21)
4 Yɛpɛ sɛ nnipa hu yɛn sɛ Kristo asomfo* ne Onyankopɔn ahintasɛm kronkron so ahwɛfo.*+ 2 Eyi mu no, nea wɔhwehwɛ fi ofiehwɛfo hɔ ne sɛ wobehu sɛ odi nokware. 3 Na me de, ɛho nhia me pii sɛ mo anaa nnipa bagua* bi besi me ho nkongua ahwehwɛ m’asɛm mu.* Nea ɛwom ne sɛ, me ara mpo, menhwehwɛ me mu. 4 Efisɛ minhu asɛm biara a ɛwɔ me ho. Nanso eyi nkyerɛ sɛ meyɛ ɔtreneeni. Nea ɔhwehwɛ me mu* ne Yehowa.*+ 5 Enti mummmu biribiara ho atɛn+ ansa na bere no adu, kosi sɛ Awurade bɛba. Ɔno na ɔde nea ahintaw wɔ sum mu bɛba hann mu, na wayi komam nsɛm adi; ɛno na afei obiara benya n’ayeyi a ɛfata no afi Onyankopɔn hɔ.+ 6 Afei anuanom, mo yiye mu nti na maka asɛm yi afa me ne Apolo+ ho, na monam yɛn so asua saa asɛm yi: “Monnyɛ ade nntra nea wɔakyerɛw no,” na moamma mo ho so+ ampɛ obi asɛm ankyɛn ne yɔnko. 7 Na hena na ɔma wokyɛn obi? Dɛn koraa na wowɔ a woannya?+ Na sɛ nya na wunyae a, adɛn nti na wudwa w’anom te sɛ nea woannya yi? 8 Sɛ́ moamee dedaw? Sɛ́ moanya mo ho dedaw? Sɛ́ moafi ase redi hene+ a yɛnka ho? Me yam paa a, anka moafi ase redi hene, na yɛn nso yɛaka mo ho ne mo adi hene.+ 9 Na yɛn a yɛyɛ asomafo no de, ɛyɛ me sɛ Onyankopɔn de yɛn atwa to ayi yɛn akyerɛ sɛ nnipa a wɔabu wɔn fɔ sɛ wonkokum wɔn,+ efisɛ yɛadan ade a wiase ne abɔfo ne nnipa nyinaa rehwɛ.+ 10 Kristo nti yɛyɛ nkwaseafo,+ na mo de, moyɛ anyansafo wɔ Kristo mu; yɛyɛ mmerɛw, na mo de, moyɛ den; mowɔ anuonyam, na yɛn de, nkurɔfo mfa yɛn nyɛ hwee. 11 Ɛde besi nnɛ nyinaa, yedi kɔm+ ne sukɔm,+ yɛdeda adagyaw,* wɔboro yɛn,+ yenni baabi te, 12 na yɛbrɛ de yɛn ankasa nsa yɛ adwuma.+ Sɛ wɔyeyaw yɛn a, yehyira wɔn;+ sɛ wɔtan yɛn ani a, yɛtɔ yɛn bo ase de animia gyina mu;+ 13 sɛ wɔsɛe yɛn din a, yɛde ntoboase kasa+ kyerɛ wɔn;* ɛde besi nnɛ nyinaa, yɛayɛ sɛ sumina* wɔ wiase, nneɛma nyinaa mu nwura. 14 Ɛnyɛ sɛ merekyerɛw nsɛm yi de abɛhyɛ mo aniwu, na mmom mede rebetu mo fo sɛ me mma a medɔ mo. 15 Sɛ mowɔ akwankyerɛfo* 10,000 wɔ Kristo mu mpo a, agyanom de, munni bebree; na menam asɛmpa no so ayɛ mo agya wɔ Kristo Yesu mu.+ 16 Enti mitu mo fo sɛ, munsuasua me.+ 17 Ɛno nti na meresoma Timoteo aba mo nkyɛn no, efisɛ ɔyɛ me ba a medɔ no na odi nokware wɔ Awurade mu. Ɔbɛkaakae mo sɛnea meyɛ me nneɛma* wɔ Kristo Yesu mu,+ sɛnea merekyerɛkyerɛ baabiara wɔ asafo biara mu no. 18 Ebinom adwene yɛ wɔn sɛ meremma mo nkyɛn, enti ahomaso ahyɛ wɔn ma. 19 Nanso sɛ Yehowa* pɛ a, ɛrenkyɛ biara mɛba mo nkyɛn, na mabehu wɔn a wɔama wɔn ho so no tumi, ɛnyɛ wɔn kasa. 20 Efisɛ Onyankopɔn Ahenni nnyina kasa so, na mmom tumi so. 21 Nea ɛwɔ he na mopɛ? Memfa abaa mmra mo nkyɛn,+ anaa memfa ɔdɔ ne odwo?*
^ Anaa “asomfo a wɔhyɛ Kristo ase.”
^ Anaa “afiehwɛfo.”
^ Anaa “asɛnnibea.”
^ Anaa “adi m’asɛm.”
^ Anaa “odi m’asɛm.”
^ Anaa “yɛn ntaade ntumi nkata yɛn ho yiye.”
^ Nt., “yɛsrɛ.”
^ Anaa “akyerɛkyerɛfo.”
^ Nt., “m’akwan.”
^ Anaa “odwo honhom?”